Degso BiP Messenger loogu talagalay Windows
Bilaash Degso loogu talagalay Windows (106.40 MB)
Degso BiP Messenger,
BiP Messenger waa fariin deg deg ah oo Turkcell iyo codsi fiidiyoow ah oo fiidiyow ah oo loo adeegsan karo aaladaha mobilada (Android iyo iOS), daalacashada shabakadaha iyo desktop (kumbuyuutarrada Windows iyo Mac) Dhagsii badhanka BiP Desktop-ka ee kor ku xusan si aad ugu adeegsato kombuyuutarkaaga BiP Messenger, oo ah adeeg fariin deg-deg ah oo caan ku ah dalkeenna WhatsApp iyo Telegram. BiP desktop desktop waa lacag laaan.
Soo Degso BiP
Turkcell BiP Messenger waa madal isgaarsiineed oo bilaash ah oo ay soo saareen 100% injineero Turki ah. Fariimaha iyo sheekaysiga fiidiyowga mooyee, waa madal aad kala socon karto joornaalada, cayaaraha, xaaladaha cimilada iyo sicirka sarrifka. Waad ku mahadsan tahay qaabka tarjumaadda BiP, waxaad farriin ugu diri kartaa xiriiradaada luqad kasta waxaadna ugu turjumi kartaa farriimaha soo galaya luqadda aad rabto. Waad sameyn kartaa wicitaano tayo sare leh oo HD ah iyo wicitaano fiidiyoo ah iyo wicitaano fiidiyoow kooxeed ah oo ay la socdaan ilaa 10 qof oo Bip ah. Hadiyadaha leh dhibcaha dhibku waxay ku jiraan barnaamijka moobiilka ee BiP. Waxaad sidoo kale ka hubin kartaa SMS-kaaga adigoo adeegsanaya BiP. Maxaa ku jira BiP?
Wicitaanada codka iyo fiidiyowga: Waad ku samayn kartaa wicitaanno tayo sare leh iyo wicitaan fiidiyoowga ah internetka dhammaan kuwa aad jeceshahay ee BiP.
Farriinta baabaaysa: Iyada oo farriinta la waayey ay tahay mid u gaar ah BiP, waxaad ka dhigi kartaa fariimahaaga inay ka baabiiyaan shaashadda sheekada ka dib waqtiga aad dejisay inta aad farriinta u direyso kuwa aad jeceshahay.
Waxyaalaha xiisaha leh sida meel kale: Ishiiladaha xiisaha leh ee Yiğit Özgür loogu talagalay oo kaliya loogu talagalay BiP, iyo istiikarada badan oo qaab Turki ah iyo koofiyado ayaa ka dhigaya wada hadalkaaga BiP midab badan.
Abuuritaanka koofiyadaha: Waxaad abuuri kartaa koofiyadahaaga adoo adeegsanaya sawir jira oo ka socda BiP ama sawir cusub ka qaad oo la wadaag dhammaan dadka aad jeceshahay.
Awood u lahaanshaha inaad la xiriirto qof walba: Waxaad u wareejin kartaa dhammaan isgaarsiintaada shirkadda BiP! Waxaad sidoo kale fariin ugu diri kartaa asxaabtaada aan ahayn BiP adoo SMS uga diraya gudaha BiP.
Fariin kooxeed: Waxaad farriin ugu diri kartaa saaxiibo badan isla sheekaysiga.
Wadaagista Goobta: Waxaad ku wadaagi kartaa goobtaada hal-hal-hal ama fariin kooxeed.
BiP Web: Waxaad ka isticmaali kartaa BiP kombiyuutarkaaga ama kiniinkaaga adoo isticmaalaya web.bip.com.
Xaaladda Habeen BiP: Adoo adeegsanaya BiP habka habeenkii, waxaad lahaan kartaa khibrad fariin oo ka wanaagsan oo batari waad badbaadin kartaa.
Sidee loo Bixiyaa BiP Kombiyuutarka?
Waxaad kala soo bixi kartaa barnaamijka BiP kombiyuutarkaaga adigoo gujinaya batoonka BiP ee kor ku xusan. Si aad uga bilowdo fariinta fariimahaaga desktop;
Fur BiP taleefankaaga Android / iPhone.
Taabo astaanta More oo xulo BiP Web.
Sawirka lambarka QR ee midigta ka mari BiP.
Under Settings - BiP Web, waxaad arki kartaa aaladaha gala iyo ka bixida.
BiP Messenger Noocyada
Cabirka Faylka: 106.40 MB
Wararkii Ugu Dambeeyay: 05-07-2021
WhatsApp waa barnaamij si fudud loo rakibo oo fariin lacag laaan ah oo aad u isticmaali karto...
Zoom waa codsi Windows ah oo aad ugu biiri karto wada sheekaysiga fiidiyowga qaab fudud, kaasoo...
Khilaafka waxaa lagu qeexi karaa inuu yahay cod, qoraal iyo barnaamij sheekeysi fiidiyow ah oo lagu...
BiP Messenger waa fariin deg deg ah oo Turkcell iyo codsi fiidiyoow ah oo fiidiyow ah oo loo...
Barnaamijka farriinta moobiilka ee caanka ah Viber ayaa hadda laga heli karaa Windows-ka. Waad ku...
Waa Maxay Skype, Ma La Bixiyaa? Skype waa mid ka mid ah barnaamijyada fiidiyowga lagu sheekeysto ee...
Barnaamijka wada-hadalka lagu kalsoon yahay ee ICQ ayaa dib ugu soo noqday ajandaha iyadoo ay la...
Thanks to nooca desktop-ka ee LINE, oo ah codsi fariin moobiil ah, waxaad kula xiriiri kartaa...
Twitch waxaa lagu qeexi karaa inuu yahay barnaamijka rasmiga ah ee loo yaqaan Twitch desktop...
Boodhka Cyber ​​Dust waa barnaamij fariin deg deg ah oo leh nidaam u eg Snapchat oo si toos ah...
TeamSpeak 3 waa barnaamij si weyn caan u ah gaar ahaan ciyaartooyda wuxuuna noo ogolaanayaa inaan...
Yahoo! Mail waa codsiga emailka Yahoo ee loogu talagalay Windows 10 isticmaaleyaasha kombiyuutarka...